आउँदो शनिबार सूर्यग्रहण लाग्दै, कुन राशिलाई कस्तो प्रभाव ? « गोर्खाली खबर डटकम
काठमाडौँ । अंग्रेजी वर्षको अन्तिम सूर्यग्रहण शनिबार, ४ डिसेम्बर २०२१ मा लाग्दैछ। चन्द्रग्रहण जस्तै, सूर्यग्रहण पनि एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना हो।ज्योतिष शास्त्रमा ग्रहणलाई अशुभ घटनामा गनिन्छ। यस कारणले गर्दा ग्रहणको समयमा शुभ कार्य र पूजा गर्नु वर्जित मानिन्छ।
सूर्यग्रहणको समयमा सूर्यलाई दुःख लाग्ने विश्वास गरिन्छ, जसका कारण सूर्यको शुभता घट्छ। अंग्रेजी वर्षको अन्तिम सूर्यग्रहण र त्यसको प्रभावबारे जानकारी गरौं।
ज्योतिषी डा. अरविन्द मिश्रले चन्द्रग्रहणपछि वर्षको अन्तिम सूर्यग्रहण २०२१ डिसेम्बर ४ गते शनिबार लाग्ने बताए।यो दिन मार्गशीर्ष महिनाको कृष्ण पक्षको अमावस्या हो। सूर्यग्रहण डिसेम्बर ४ मा बिहान १०ः५९ मा सुरु हुनेछ, जुन दिउँसो ३ः०७ मा समाप्त हुनेछ।
वर्षको अन्तिम सूर्यग्रहण अन्टार्कटिका, दक्षिण अफ्रिका, अष्ट्रेलिया र दक्षिण अमेरिकामा देखिनेछ। यो ग्रहण नेपाल र भारतमा देख्न सकिँदैन। ज्योतिषहरुका अनुसार नेपाल र भारतमा देखिने छैन, जसका कारण यसको सुतक अवधि मान्य हुनेछैन।
सुतक अवधि सूर्यग्रहणको १२ घण्टा अघि सुरु हुन्छ। यो ग्रहण छाया हुनेछ। ज्योतिषशास्त्रका अनुसार पूर्ण ग्रहण लागेमा मात्र सुतक अवधि मान्य हुन्छ। आंशिक वा छाया हुँदा सुतकको नियम पालना गर्नु आवश्यक छैन।
वर्षको अन्तिम चन्द्रग्रहण नोभेम्बर १९ मा भएको छ । अब १५ दिनभित्र यो दोस्रो सूर्य ग्रहण हो। ज्योतिषशास्त्रमा यति छोटो समयको अन्तरालमा लाग्ने ग्रहणलाई अशुभ मानिन्छ। यी दिनहरु राम्रो मानिने छैन।